Nezveutano - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Nezveutano maindasitiri pasirese ari kuvimba nehupo hwepamhepo uye webhu mhinduro dzekusiyanisa masevhisi avo. Mobile mhinduro inobatsira nezveutano nyanzvi dzinowana tsamba dzekurapa dzevarwere uye kuongorora, kugadzirisa ruzivo rwevarwere, kubvunza zvinodhaka, uye data rinoenderana nedhipatimendi rakanangana nechipatara, pasina kubatana kwewaya. Mhinduro dzakadai dze nhare dzinounganidza mashandiro, kudzoreredzwa kwevarwere, manejimendi rekodhi rehutano, marekodhi ekubhadhara, marekodhi echiremba uye inopa kusangana neBI uye CRM masisitimu nekudaro zvichigonesa vashandi vepachipatara kutora uye kuwana ruzivo pavanenge vachifamba vasina kunonoka chero danho uye chiito chakamirira.
Zvatinoita pa NEWGENAPPS
Newgenapps inopa akasiyana siyana etsika dhizaini masevhisi anokodzera chipatara chako uye nezveutano system inovharirwa zvido. Isu tinozivikanwa Amazon Web Services mupi, iyo inobatsira nezveutano vanopa kupota pasirese vanounza tarisiro yakavandudzwa kuvarwere vavo. Iwo masevhisi anobatsira kudzikisira nguva yekumhanyisa zviripo zvebasa uye kupa mukana kune ane simba ekuongorora kugona uye maficha.
Unyanzvi hwedu hwakagadzirirwa muindasitiri yehutano
Simbisa mashandiro anoita
munhu zvichienderana nezveutano chero kupi zvako munyika
Kuchengetedza dhata kugovana
Yechokwadi nguva yekuuraya yekutarisa system muChipatara
Patient yakadzama manejimendi manejimendi
utano Data management